Baby – Page 8 – Healthy Life Journal
လက်သည်းနီကိုက်ရင် ဘာဖြစ်တတ်ပါသလဲ . . .
မေး. ကျွန်မသမီးလေးက လက်သည်းကိုက်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိပါတယ်။ အကျင့်ပျောက်အောင် လက်သည်းနီဆိုးပေးထားတာ . . လက်သည်းနီမကျန်အောင် ကိုက်လိုက်လို့ ကျွန်မစိတ်ပူလို့ပါ။ ဘာဖြစ်တတ်ပါသလဲ။ ဒေါ်သီသီဝင်း၊ နေပြည်တော်။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ကလေးတွေကို လက်သည်းနီ...
ကလေးများအကြောင်း သင်မသိသေးသည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အချက်များ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကလေးတွေ ချစ်စရာကောင်းသလားလို့မေးရင် သိပ်ကိုချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ပဲ ဖြေကြမှာပါ။ သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကလေးလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ မိဘတိုင်းနဲ့ ချစ်စဖွယ် သားသားမီးမီးလေးယူဖို့ ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ မိဘတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အချက်တွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အချက် (၁)...
မိခင်နို့ချို တိုက်ကျွေးနေတဲ့ကလေးတွေကို ပူနေရင်တောင် အသက်ခြောက်လအထိ ဘာကြောင့်ရေမတိုက်သင့်တာလဲ . .
– မွေးကင်းစကလေးငယ်လေးတွေကို ရေတိုက်ရင်ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်ရောဂါနဲ့ အာဟာရချို့တဲ့မှု ဖြစ်နိုင်ခြေများပါတယ်။ – ရေကမသန့်တာဖြစ်နေနိုင်ပြီဆိုရင် ကလေးမှာပိုးဝင်နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။ – မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးနေတဲ့ ကလေးတွေကိုရေတိုက်လိုက်ရင် ကလေးကမိခင်နို့ချို့စို့တာ နည်းနိုင်ပါတယ်။ – ကလေးကစောစောနို့ဖြတ်လိုက်ရင် အာဟာရချို့တဲ့နိုင်တယ်။ မိခင်ကလည်းနောက်ပိုင်းမှာ နို့ထွက်နည်းလာနိုင်ပါတယ်။ – မိခင်နို့ချိုထဲမှာ ရေဓာတ်က...
မေး။ ။ ရေကျောက်ပေါက်ရင် သက်သာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သင့်ပါသလဲ။ လှိုင်ကိုကိုဦး (FB) ပါမောက္ခဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ကြီး၊မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီး။ ဖြေ။ ။ ယားရင် အယားသက်သာစေမယ့် ဆေးလိမ်းရပါမယ်။ ဆေးစားရပါမယ်၊ ရေဖတ်တင်ရပါမယ်။ ရေကျောက်ဖြစ်နေပေမယ့် ရေချိုးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရည်ကြည်ဖုလေးတွေကို...
သားသား မွေးမှာလား၊ မီးမီး မွေးမှာလား ရှေးခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆေးပညာအမြင်
မီမိုး ကိုယ်ဝန်ရှိလာတဲ့အခါ မိဘတွေက သူတို့ ရင်သွေးလေးက သားလေးဖြစ်မလား၊ သမီးလေး ဖြစ်မလားဆိုပြီး ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားကြပါတယ်။ တချို့ဆို ရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် ပထမ သီတင်းပတ် အနည်းငယ် ကတည်းက သားလေးလား၊ သမီးလေးလားဆိုတာ သိချင်လို့ ဗေဒင်မေးတာမျိုး လုပ်ကြတယ်။...
ကိုယ်ဝန်ဘယ်နှလဆို ကလေးလှုပ်ပြီလဲ . . .
မေး – ကိုယ်ဝန် ဘယ်နှလလောက်ဆို ကလေးလှုပ်တာ သိရပါပြီလဲရှင့်။ ဘယ်လိုမျိုး လှုပ်တာပါလဲရှင့်။ ….. Hsu Mon Lwin ဒေါက်တာစိုးလွင် သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး မှဖြေကြားသည် ၊ ဖြေ – ကလေးကတော့ အစောကြီးကတည်းက လှုပ်...
သင့်ကလေး အိပ်ရာထဲ ဆီးသွားလို့ စိတ်ညစ်နေသလား
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကလေးတွေ ကြီးတဲ့အထိ အိပ်ရာထဲ ဆီးသွား နေရင် မိဘတွေအတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရပြီး ကလေးတွေလည်း စိတ်မသက်မသာ ခံစားရ တတ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် သိပ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ အမျိုးသား ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ လေ့လာမှုအရ အသက် ၅နှစ်-၆ နှစ်အရွယ်ကလေး...
သူနာပြုထံမှ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်နည်းကို သုံး၍ မွေးကင်းစကလေးငယ်ကို ကယ်တင်ခဲ့သည့် ဖခင်
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ ယူကေနိုင်ငံမှ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ဒန်နီယယ်ဝါ့ဒ်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူ ချဲလ်ဆီးစိုဝါဗီတို့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃လက သမီးလေးတစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပြီး မွေးဖွားချိန်မှာ သမီးလေး လေလာရို့စ်ဟာ ပေါင်ချိန် ၁ ပေါင်နဲ့ ၁၃ အောင်စပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ကလေးကို ၂၈ ပတ်နဲ့...
W ပုံစံထိုင်လေ့ရှိတဲ့ ကလေး . . .
မေး. ကျွန်မသားလေးက ငယ်ငယ်ကတည်းကထိုင်ရင် ခြေထောက်နှစ်ချောင်းနောက်ပစ်ပြီး W ပုံစံထိုင်လေ့ရှိလို့ပါ။ အဲဒီလိုထိုင်တာကြောင့် ဘယ်လိုဆိုးကျိုး ဖြစ်တတ်ပါသလဲရှင့်။ မဝါဝါ၊ ဘုရင့်နောင်။ ပါမောက္ခဦးနေဝင်း(အရိုးခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး) မှဖြေကြားသည် ဖြေ. ကလေးတွေက ဒီလို W ပုံစံ ထိုင်တတ်ကြပါတယ်။ အန္တရာယ်ကြီးကြီးမားမား မရှိပါဘူး။ အသက်အရွယ်...
အလုပ်လုပ်တဲ့မေမေ ရင်သွေးကို မိခင်နို့ချိုတိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် . .
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) အလုပ်လုပ်တဲ့ကလေးမေမေတွေက အလုပ်မသွားခင် မနက်ဆိုရင်နို့ညှစ်ပြီး ခွက်လေးတွေထဲထည့်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားမယ်ဆိုရင် တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ၇၂ နာရီတောင်ထားပြီး ကလေးကိုတိုက်လို့ရပါတယ်။ ဒီမှာတော့ မီးကလည်းပျက်တတ်တဲ့အတွက် လေးနာရီအတွင်း အကုန်တိုက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ မိခင်နို့ကို ရေနွေးကြမ်းပန်းကန်လုံးလေးခွက်ထဲ ညှစ်ထည့်ပါ မေမေကအလုပ်ကို ရှစ်နာရီလောက်သွားမယ်ဆိုရင် မိခင်နို့ကို...